Wacom dia manolotra ny Stylus Creative Intuos, penina nomerika momba ny tsindry | Vaovao IPhone
Wacom dia manolotra ny Intuos Creative Stylus, penina nomerika marefo amin'ny tsindry
Ny mpamorona izay manana iPad dia ao anaty vintana, satria Wacom dia nanolotra tombokavatsa izay tian'izy ireo ho afaka (amin'ny farany) hampiasa ny takelaka ho an'ny zavatra noforonin'izy ireo toy ny hoe mampiasa pensilihazo sy taratasy izy ireo. Ny Wacom Intuos Creative Stylus dia marika vaovao izay tsy mitovy amin'ny iray izay efa hitanao hatrizay, satria sensor sensor iray izay mamela ny hatevin'ny soritra hiovaova arakaraka ny tsindry azonao amin'ny pensilihazo. Amin'izany no hahafahanao mahatratra tsipika voajanahary bebe kokoa sy zavaboary matihanina bebe kokoa amin'ny alàlan'ny iPad anao «taratasy».
Ny fitaovana dia aseho amin'ny tsara tranga misy stylus, misy amin'ny loko roa, mainty sy manga, miaraka amin'ny toro-hevitra roa fanoloana, ary bateria AAAA iray. Eny, tsy nanao fahadisoana tamin'ny "A" be loatra aho, maodely bateria izay tsy fantatro akory hoe nisy hatrizay, fa ny fikarohana haingana any Amazon dia mamela ahy ho tony kokoa satria manana modely samihafa izy ireo, marika toa ny Energizer amidy izany. Wacom dia nilaza fa manome hatramin'ny 150 ora fampiasana izy io. Ary maninona no misy bateria, raha miasa ireto penina ireto rehefa mikasika ny efijery an'ny iPad ianao?
Araka ny efa nolazaiko teo aloha, ny Wacom dia tsy stylus mahazatra. Noho ny fifandraisany Bluetooth 4.0, mifandray amin'ny iPad anao izy, ary amin'ity fomba ity dia mandefa azy ny fampahalalana ilaina hifehezana ny soritry. Noho io karazana Bluetooth io dia mifanaraka amin'ny iPad 3, 4 ary Mini ihany izy io. Ny Stylus dia afaka mamantatra hatramin'ny 2048 teboka fanerena samihafa, mba hahafahantsika mahazo hevitra momba ny fahatsapana fa afaka ananana. Izy io koa dia manana bokotra roa eo akaikin'ny tendrony izay mamela anao hiditra haingana amin'ireo fiasa toy ny afaka mamafa amin'ny pensilihazo, na manafoana ny hetsika farany.
Mbola misy bebe kokoa aza, satria Papana volotsangana, ny fampiharana izay ampiasain'ny mpanamboatra iray ihany miaraka amin'ity stylus ity dia manana fahaizana lehibe aza raharahiana ny fifandraisana ataonao eo amin'ny efijery rehefa manohana ny tananao raha manao sary ianao. Raha nisy nampiasa stylus hanoratany na hanoratany iPad, dia ho tsapanao fa mahasosotra ny mitazona ny totohondrinao hiala ny efijery, tantara ity noho ity fampiharana ity. Ho fanampin'izany, ny Wacom Intuos Creative Stylus dia mifanaraka amin'ny rindranasa hafa, izay anasongadinay:
Autodesk SketchBook Pro ho an'ny iPad
Mbola tsy misy vidiana ny stilosy, na izany aza eny afaka mamandrika ianao izao amin'ny tranokala ofisialiny, $ 99,95. Vantany vao amidy, antenaina fa hanana fivarotana manokana maro hafa koa hanana izany.
Fanazavana fanampiny - Adobe Ideas dia nohavaozina miaraka amin'ny fanatsarana maro ny lalana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Wacom dia manolotra ny Intuos Creative Stylus, penina nomerika marefo amin'ny tsindry
Lohahevitra WinterBoard misy akony paralaks amin'ny efijery hidin-trano (Cydia)
AutoOK: ekenao ny tenimiafinao rehefa marina (Cydia)